हाम्रो बारे - Jinbiao निर्माण सामाग्री कं, लिमिटेड।
HEBEI JINBIAO निर्माण सामाग्री टेक कर्प।, लि।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी मूल्य, सन्तुष्ट वितरण र उत्कृष्ट सेवा संग विश्वव्यापी हाम्रो ग्राहकहरु प्रदान गर्न हो। ग्राहक सन्तुष्टि हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। हामी हाम्रो शोरूम र कार्यालय भ्रमण गर्न स्वागत गर्दछौं। हामी तपाईंलाई साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित गर्न अगाडी देख छन्।
हेबै Jinbiao निर्माण सामाग्री 1986 मा स्थापित छ निर्माण सामाग्री को उत्पादन मा विशेषज्ञता। हाम्रो कारखाना बन्ने, liquidity.In शीजीयाजूआंग को 500 मिलियन युआन, 26 डिसेम्बर 2014, कम्पनी को शेयर बजार मा सूचीबद्ध थियो पुगन 800,000m2 अधिक क्षेत्र, 400 भन्दा बढी कर्मचारीहरु, 40 विशेषज्ञहरु संग, 60.4 RMB लाख को दर्ता राजधानी, ओगटेको पहिलो स्थानीय सूचीबद्ध कम्पनी क्षेत्र मा, उत्पादन पनि सुन मानक जाल, हल्ला बाधा र एल्यूमीनियम formwork ब्रान्ड दर्ता छन्। प्रारम्भिक 90 का मा, Jinbiao को "एएए ग्रेड गुणस्तर प्रमाणीकरण" सहित ISO9001- 2000 गुणस्तर प्रमाणीकरण पारित, "हेबै प्रान्त उल्लेखनीय उद्यम", "विश्वसनीय उद्यम", "सुरक्षित उत्पादन" र अन्य प्रमाणीकरण सम्मान।
हेबै Jinbiao निर्माण सामाग्री टेक कर्प, लिमिटेड। Anping मा आधारित तार जाल fencings, कांटेदार तार र सम्बन्धित उत्पादनहरु को उत्पादन र विकास मा लगी भएको छ, चीन को प्रसिद्ध वायर मेष भूमि।
उत्पादन गुणस्तर: हाम्रो उत्पादनहरु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली, इस्वी संवत् उत्पादन प्रमाणीकरण को ISO9001 प्रमाणपत्र पारित, र दक्षिण पूर्व एशिया मा ध्वनिक संस्थाहरू एक दीर्घकालीन सहयोग स्थापित गरेको छ। JINBIAO विशेष गुण निरीक्षण टोली माथि सेट बाहेक सबै उत्पादनहरु राम्ररी योग्य छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न।
उत्पादन क्षमता: JINBIAO कम्पनी वायर मेष बाड, ध्वनि बाधाओं र एल्यूमिनियम Formwork सहित3उत्पादन बिरुवाहरु छ। दैनिक उत्पादन क्षमता 18km बार, 5000 m2 ध्वनि बाधाओं, र 8000 पीसी एच स्टील पोस्ट पुग्न सक्दैन। एल्यूमीनियम Formwork डिजाइन र 10 भन्दा बढी सेट प्रति महिना भवन लागि उत्पादन।
Jinbiao प्रथम श्रेणी उत्पादन निरीक्षण र आर एन्ड डी उपकरण को 80 भन्दा बढी सेट संग सुसज्जित छ वर्ग पोस्ट तार जाल बार उत्पादन, विश्वव्यापी लागि तार जाल रोल, चेन लिंक बार, चिकन तार जाल, भेडा / गाई / क्षेत्र बार, कांटेदार तार र हल्ला बाधा वेल्डेड ग्राहकहरु।
हामी हाम्रो ग्राहकहरु 'आवश्यकता पूरा गर्न उच्च गुणवत्ता उत्पादनहरु सुनिश्चित गर्न एक मानक उत्पादन र पूर्ण गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली छ।
हाम्रो कम्पनी चीन मा एक राम्रो प्रतिष्ठा जित्यो छ र हामी धेरै देशहरूमा र क्षेत्रहरु गर्न उत्पादनहरु निर्यात।
तपाईंको बाड आवश्यकता को लागि, अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
उत्पादन सी apacity :
उत्पादन ई quipment :
हाम्रो अर्को लक्ष्य उल्लेखनीय ग्राहक सेवा, वृद्धि लचीलापन र ठूलो मूल्य भेटी द्वारा हरेक ग्राहक को आशा भन्दा बढी छ। सबै सबै, हाम्रो ग्राहकहरु बिना हामी अवस्थित छैन; खुसी र पूर्णतया सन्तुष्ट ग्राहकहरु बिना, हामी असफल। लागि थोक, ड्रप जहाज हामी हेर्दै छौं। तपाईं हाम्रो उत्पादनहरु रोचक छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं सबै व्यापार गर्न आशा। उच्च गुणस्तर र छिटो ढुवानी!
हाम्रो स्थापना, हामी हाम्रो उत्पादन र ग्राहक सेवा सुधार मा राख्नुहोस्। हामी प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु मा उच्च गुणवत्ता बाल उत्पादनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्न सक्षम छन्। पनि हामी आफ्नो नमूनाहरू अनुसार फरक बाल उत्पादनहरु उत्पादन गर्न सक्छन्। हामी उच्च गुणवत्ता र उचित मूल्य मा जिद्दी। यो बाहेक, हामी सबै भन्दा राम्रो OEM सेवा प्रदान गर्नुहोस्। हामी न्यानो भविष्यमा आपसी विकास लागि हाम्रो साथ सहयोग गर्न सबै दुनिया भर OEM आदेश र ग्राहकहरु स्वागत गर्दछौं।
वर्तमान मा हाम्रो बिक्री नेटवर्क ग्राहकको माग पूरा गर्न सेवा गुणस्तर सुधार, निरन्तर बढ्दै छ। तपाईं कुनै पनि उत्पादन मा रुचि हो भने, कुनै पनि समयमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी निकट भविष्यमा तपाईंसँग सफल व्यवसाय सम्बन्धमा गठन गर्न अगाडी देख छन्।
हामी यस क्षेत्र मा उत्पादनहरु को ठूलो विविधता प्रस्ताव। यसबाहेक, अनुकूलित आदेश पनि उपलब्ध छन्। के थप छ, तपाईं हाम्रो उत्कृष्ट सेवा पाउनेछन्। एक शब्द मा, आफ्नो सन्तुष्टि प्रत्याभूति गरिएको छ। हाम्रो कम्पनी भ्रमण स्वागत छ! थप जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो website.If कुनै पनि थप अनुसन्धानका आएको, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिच्किचाउनुहोस्।
+ -3 86--3१--9०767615158
पूर्ण रूपमा पूर्ण भयो — Rongwu High-spe ...
नयाँ प्रदर्शनी हल
जिनबियाओको एल्युमिनियम उत्पादनहरू